Twin Seoul nesigaba esigabeni lesithupha njengoba esho "ovukayo" kuyinto
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Twin Seoul nesigaba esigabeni lesithupha njengoba esho "ovukayo" kuyinto
Ebhekene nazo ukwahlukana phakathi esiteji wesine into yangempela [3500 yen asihlole Mahhala] ukuze izangoma ka ukuthola indlela
umphefumulo ezimbili esiteji, futhi uligqolozele ngokwami ??phakathi esigabeni yesihlanu wena buqamama, kwaba nenkathi ihlose Awakening ezingokomoya ukuthuthukisa bebodwa. Isikhathi ukuthethelela bonke abantu emhlabeni hhayi kuphela abaphikisi, ngokuthulula uthando olungenamkhawulo, kuzokwenzeka resonance komphefumulo.
ngenqubo, ke bayokwazi uqhubekele esigabeni lesithupha, okuyinto esigabeni esilandelayo. Kulesi sigaba, walahla ngokuphelele ukuzazisa ukuthi ubanjwe kuze kube manje, thina ongasukuma esigabeni ephakeme njengomuntu.
hhayi wena, cabanga ukuthi yini engenziwa ukuze umuntu ngaphandle kokubuza ukubuya, futhi engibukeka weqiniso, umzimba nengqondo ukuza egcwele amandla kokufaka Awakening ezingokomoya uzobona. Uma kungenzeka ukuba uqhubeke
kule esiteji, eseqedile isikhathi lokwehlukaniswa, okuyinto ziye zakhuthazelela ungakwazi uqhubekele esigabeni sokugcina.
kulesi sigaba ukuthi uthando
? olungenamkhawulo lapho wamukela ngokugcwele Awakening batheleka bonke abantu, ulahle konke ukuzazisa esiye kutshalwa kokuhlangenwe nakho futhi ulwazi esidlule, umphefumulo unguye umoya uphapheme sizoqhubeka ngendlela. Khona-ke, akuseyona kungenzeka ukucabanga ngezinto ku nenzuzo nokulahlekelwa, aba ngakho uthele uthando olungenamkhawulo bonke abantu.
kukhona, akukho ukuzazisa, ezifana ngayo ukucabanga kahle kubantu komphefumulo amabili kuma. Ukuze zonke izenzakalo ezenzeka bebodwa, wamukele futhi sekuyinto ngangokunokwenzeka, ukuthethelela, futhi ungaba uthando.
Lona, ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu umcimbi alethwe kuzoholela ukwamukela konke.
? konke wamukele kokungathathi hlangothi le
ukwamukela konke, kanjalo lishiywe kuphela uhlobo okwalethwa Nkulunkulu, ukubeka bebodwa Hhayi izinto ecasukile Rusubete, izokwamukelwa e hlangothi. It ubuhlungu ukuthi ubalekile kuze kube manje, ubuso odongeni ngisho ngaphandle Gwema, wena-ke ayisekho bayesaba ukuvumela wena umqondo kaNkulunkulu futhi yonke.
Yingakho, uthando olungenamkhawulo sokungazifuneli ukubuya uzokwazi ukudubula emhlabeni. Thanda ukuba ukungathathi hlangothi uyoba ngokuphelele into, uma angamvusa ngokwakho lapho, uzokwazi ukuba abangele resonance komphefumulo twin wena maduze. Lapho
kudedelwa ukuzazisa ukuza
kulesi sigaba ukuthi ube lula, kwakunzima kuze kube manje zinyamalale, uyozizwa njengomhubi a wanelisekile bekhululiwe ukuzazisa. Khona-ke, uzoqaphela ukuthi zinyamalale uhudula kuze kube manje zijwayele kahle. Lona Awakening okungokomoya umqondo wegama kweqiniso.
ukuthuthukisa bebodwa, uma kungenzeka azidlulisela uyazi ezungezile uthando olungenamkhawulo, Ukuhlangana umphefumulo twin ulinde ngokushesha lapho.